Chiedza Bhokisi Series
Wall Kushongedza Series
Ratidza Props Series
ne admin pane 21-01-05
Takaita tembiricha yekuzvarwa inodziya munguva yechando, kupemberera pamwe nekubata BBQ yekunze. Musikana wekuzvarwa akawanawo hamvuropu tsvuku kubva kukambani.
Online Exhibition yeChiratidzo & Kuisa -Mexico neVietnam
Muna Zvita, Shawei Label yakabata zviratidziro zviviri online kuMexico kurongedza uye Vietnam Kunyora.Pano tiri kunyanya kuratidza edu ane mavara DIY kurongedza zvinhu uye Art mapepa mapepa kune mutengi wedu, uye tinounza kudhinda & kurongedza maitiro, pamwe nebasa. Kuratidzira kwepamhepo kunotibvumidza kuti titaure ...
Nhema Dzoka Kunze Kwekunze PVC Banner
Spray machira anosiyana kubva pakuita uye mashandisiro. Inogona kusiyaniswa neukobvu, kureruka uye zvigadzirwa, nezvimwe. Chigadzirwa Nhanganyaya jira dema nechena zvinodaidzwa zvakare kuti dema kumashure mwenje bhokisi jira kana jira jira.Iri kudziisa iwo ekumusoro uye ezasi maviri akaturikidzana eakaumbwa PVC firimu, ...
HUAWEI - Iko kudzidziswa kwekugona kugona
Kuti ivandudze kugona kwevatengesi, kambani yedu nguva pfupi yadarika yakapinda kosi yekudzidzira yeHUAWEI. Yepamberi yekutengesa pfungwa, kwesainzi timu manejimendi isu uye nezvimwe zvakanakisa zvikwata kudzidza yakawanda ruzivo. Kubudikidza nekudzidziswa uku, timu yedu ichave yakanyanya kunaka, isu tinoshandira e ...
DIY Heat Kutamisira Yega Inonamira Vinyl
Chigadzirwa Zvimiro: 1) Adhesive vinyl yekucheka kuronga zvese glossy uye matte. 2) Solvent kumanikidza inonzwisisika zvachose chinamatira. 3) PE-Yakavharwa nesilicon Wood-Pulp Pepa. 4) PVC calendared firimu. 5) Kusvika kusvika pagore kusimba. 6) Strong tensile uye ekunze kuramba. 7) 35+ mavara kusarudza 8) Transluce ...
Kunze BBQ Bato
Shawei dijitori Ronga zviitiko zvekunze nguva nenguva kuti upe mubayiro timu nechinangwa chitsva chidiki.Iri timu diki uye rine simba, vechidiki vanogara vachida rimwe basa rekugadzira uye zviitiko.
Kuti ushandire zvirinani vatengi, nzwisisa zvavanoda, SHAWEI DIGITAL anogara akabata kudzidziswa kwehunyanzvi kuchikwata chekutengesa, kunyanya Nyora zvinhu zvitsva uye yekudhinda muchina wekudzidzisa. Kunze kwemakirasi epamhepo kubva kuHP Indigo, Avery Dennison naDomino, SW LABEL vanorongawo kushanyira printin ...
SW Label yakatarwa mazuva maviri ekunze achitambanudza uye akakwanisa timu yese muHangzhou, kudzidzira kushinga kwedu uye kubatana. Munguva yekudzidzira, nhengo dzese dzakashanda pamwechete zvakanyanya. Uye Ndiyo tsika yekambani-Tiri mhuri hombe muShawei Chikwata!
Pe Banner NON PVC
Green Kudhinda Midziyo-5M upamhi Pe Banner NON PVC 5M upamhi, inogona kudhindwa neEco-solvent, Solvent, UV, HP Latex Grams inogona kuva 100g, 110g, 120g, 140g, 160g, 170g NON PVC, Inogadziriswazve, isina Musono
Ndeupi musiyano uripo pakati pemakambani dhizaini emakambani nemasangano ekushambadzira?
Kudhinda kwe UV inzira yekudhinda kwedhijitari iyo inoshandisa mwenje we-ultra-violet kuomesa kana kupora inki sezvainodhindwa. Sezvo anodhinda achigovera inki pamusoro pechinhu (chinonzi "substrate"), mwenje yakagadzirirwa UV mwenje inotevera padhuze kumashure, ichirapa - kana kuomesa - inki ini ...
Chii chinonzi UV Kudhinda?
Kukosha kwekudhinda kwemhando yepamusoro mubhizinesi
Kudhinda kwave kuwanikwa zvakanyanya kuruzhinji mumakore achangopfuura, nekudhinda kuchikwanisika zvakananga kubva kune mamwe mafoni emazuva ano. Nepo kudhinda pamusha kungave kwakakwanira kuti ushandise wega, iwo mutambo wakasiyana webhora kune vanhu vanoshandisa masevhisi ekudhinda kushambadzira bhizinesi ravo. Busine ...
Viwe Zvimwe +
Runhare: 0086 15921745861
Titevere isu pa: